Izixhobo zangaphambili zophuhliso: ezi zezona zilungileyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ezi ndawo zezona ndawo ziphambili zokudlala zabaphuhlisi bezicelo zabasebenzisi bosuku. Ukufunda ngakumbi malunga noncedo kunye nokungalunganga kwezi nkqubo, siza kuzihlalutya nzulu kweli nqaku (ubuncinci, yonke into esiyaziyo). Njengoko ndihlala ndisitsho, ngokuqinisekileyo abanye benu apha bayayazi le nto. Ukuba kunjalo, phawula ngayo yonke into esindileyo apha. Siya kukuvuyela ukuxoxa!
Namhlanje siza kuhlalutya iCodePen, JSBin, Plunkr, sublime, CSSDeck, Dabblet, kunye neLiveWeave. Zeziphi ezona zaziwayo zizixhobo ezisetyenziswa kakhulu kule ndawo. Zininzi, kunjalo.
Kodwa kubo bonke abangazi ukuba i-FrontEnd okanye i-BackEnd imalunga nantoni, masicacise kancinci. I-Front-End okanye ujongano yinxalenye ebonakalayo eya kuthi ibonwe ngumsebenzisi oza kuhamba kuyo kwiwebhu. I-BackEnd iya kuba yinxalenye yolawulo lomlawuli wesiza. Kwinkqubo, ukuba ufaka ikhowudi ngesixhobo esibonisa iziphumo ngaxeshanye, oku kuya kubizwa ngokuba ngumphambili.
1.1 Ukunikezelwa komxholo, inkxaso kunye neendlela ezimfutshane
7 Umbhalo ophezulu
Kwizixhobo ezininzi ezipheleleyo kuko konke esithetha ngako. Isetyenziswe njengesixhobo sewebhu eyona nto ikufutshane eluntwini ukubonisa umsebenzi wakho. Uhlobo lwe Youtube ukusuka kumdwelisi. Kule nto, uya kuba nakho ukubona umsebenzi wabadwelisi abadibene newebhu kwaye uqhakamshelane nabo xa unomdla, jonga iiprofayili zabo, ubalandele kuthungelwano kwaye ubhalisele nejelo labo ukujonga zonke iiprojekthi zabo ezizayo.
Ukunikezelwa komxholo, inkxaso kunye neendlela ezimfutshane
Inkxaso yakho yewebhu, yenza kube nokunyamezeleka xa ufuna ukuqala ukusebenzisa into esingayazi kakuhle. Oko akuthethi ukuba kungcono kuwe, kuxhomekeke kwiimfuno esinazo. Kodwa ewe, ukuze wazi okusingqongileyo ngcono kancinci ngaphambi kokuzibophelela ekufakeni nantoni na kwikhompyuter yemvelaphi "engaziwayo".
Ukuba ungomnye wabo baqhele ukusebenzisa Casi ngokupheleleyo ikhibhodi xa usebenza, iCodePen iya kuba yinto entle kuwe. Ezinye izixhobo zifuna plugins ukuze ukwazi ukusebenzisa iindlela ezimfutshane zekhibhodi ukugcwalisa okusingqongileyo. Oku kwenza ukuba umsebenzi ungonwabi ngakumbi (nangona kunjalo kufanelekile nje ukuba kufakwe). CP. idibanisa njengomgangatho wenkqubo eya kuthi ikwenze ugcwalise imigca efanayo yekhowudi ephindaphindwayo, njengoko inokuba kunjalo kuluhlu. Ubhala ukuba ufuna uluhlu luvele njani kwaye ucofe i-Tab.
Inguqulelo yePro ikwavumela ezinye iindlela ezininzi ngexabiso le- € 9,00 yephakeji esisiseko ukuya kwi- € 29,25 yephakheji "yeSuper". Ukwazi ukuhlaziya izixhobo ezininzi ngaxeshanye kwinto esiyenzayo kwenye. Imowudi yokusebenzisana, "imo katitshala", njl. Zuza ukuba ufuna apha.
I-JSBin sisixhobo esinokuthi sikulungele ngokuthe ngqo. Ukusukela ukuba uye kwi-domain yayo yewebhu, iya kuba ilungele ukuqala ukwenza iprojekthi yakho elandelayo, ngaphandle kokulibazisa. Kwaye nangona ukuqalwa kwayo kokuqala kungathandeki, kuyonwaba.
Nangona kunjalo, ndikufumanise kungonwabisi ukujonga ikhowudi ngokuchanekileyo, nje ukuba ifihliwe ngenxa yeekholamu ezilandelayo. Kuba, kunye nelaptop, kuya kufuneka unikezele okanye wehle nge iguqule kwaye ayinamanzi kakhulu.
Inezitofu ezimbini kuphela, simahla okanye sihlawulwe. Oku kubiza kakhulu kuneCodePen, nangona uyihlawula rhoqo ngonyaka, inenzuzo ngakumbi, ukuba ungahlawula i-120 euros.
Indawo yokusebenza ye I-CSSDeck yahlukile kule ibonwe ngasentla. Yahlulwe yaziikholamu ezimbini kuphela, ikhowudi ebonakalayo, i-CSSDeck isebenza ngemigca emi-3 ezantsi eyahlula ngayo iintlobo ezahlukeneyo zolwimi. Ngomboniso ngohlobo lwenethiwekhi yoluntu kunye nomsebenzi ococekileyo wombala okhanyayo. Kubonakala ngathi sisixhobo esilula. Nangona ngamanye amaxesha, oko akuthethi ukuba akukho nto.
Ngabasebenzisi abangaphezu kwamashumi amathandathu amawaka ababhalisiweyo kunye neeprojekthi ezingaphezu kwamakhulu amabini anamashumi amahlanu amawaka ezenziweyo, ukukhangela kunye nokufumana into oyifunayo akuyi kuba nzima. Ulwimi njengesiqhelo, ukuba inokuba yinto ephazamisayo kwabo bangasaziyo isiNgesi, kodwa koku intanethi Umfanekiso ubaluleke kakhulu, ke andicingi ukuba ngumceli mngeni omkhulu.
IPlunkr sesona sixhobo sinomtsalane endikhe ndadibana naso ukuza kuthi ga ngoku. Inkcazo-ntetho ihlanganiswe kwimiyalezo kunye nokungabikho kwemifanekiso. Ukulayisha umxholo kuhamba kancinci kwaye akuloncedo xa uqala ukuwubona. Ukongeza, uku-odolwa ngumhla kwenza nayiphi na inkqubo, nokuba ilula kangakanani, inokuba kwindawo yokuqala. Ukubona into enomdla ngakumbi kufuneka uye kwithebhu ethi: «Zibukele kakhulu«. Oko kukuthi, ukuba awuyiguquli ngeGoogle ngaphambili.
Yitsho ukuba ngokwewebhu, bakwinguqulelo 1.0.0. Ke oku kucacisa kancinci malunga noyilo, intetho kunye neempazamo ezinokwenzeka ozifumanayo xa ubrawuza iwebhu.
Njengenzuzo, ukuba uphelelwa ziimbono, awuzukuhamba okanye uvule enye ithebhu ePlunkr, kuba ngokuthe ngqo ukusuka kwicala lasekunene ungahamba nezinye iiprojekthi kwaye uzijonge kwangoko. Oku kuyakwenza lula kuwe ukuqokelela izimvo ezikhawulezayo kwaye uzisebenzise kwiprojekthi yakho ngaxeshanye.
Ingcaciso sisixhobo esilula, ungene kwaye uyile. Nangona ungabhalisa kwaye ube negama lakho lomsebenzisi kwiGitHub, ayisiyiyo into ebonakala kakhulu kwiwebhu. Ngemvelaphi etyheli ukuya kwigradient ebomvu, kwinxalenye ebonakalayo kunye nemvelaphi emhlophe kwicandelo lekhowudi (njengesiqhelo), iprojekthi yeDabblet iyaboniswa, nangona ungayitshintsha kwi-CSS tab. Kum, kungcono ukuba ingabinanto, kuba igradiyent konke okunikezelayo kuncinci impilo a
Xa uhlela, ungaqwalasela iithebhu ozibonayo ngokulula. Nokuba ufuna ukutshintshela kwiikholamu okanye kwimiqolo yokujonga ngokukhululekileyo ngokuxhomekeke kumntu ohleliyo. Ukutshintsha ubungakanani befonti, ukugcina ngokungaziwa ngaphandle kokubhalisa okanye ukuqinisekisa ikhowudi ye-HTML ngamathuba amaninzi anikezelwa yiDabblet ekuqaleni. Nangona ayisiyiyo indlela yokuqala endinokuyikhetha, kunokuba kukuthathela ingqalelo kwiinguqulelo ezizayo ukuba ziyahlaziywa.
Enye yezinto endizithandayo, kodwa ezo program zingathanda, yile awunanketho yokwenza iileyibhile kwaye ubhale yona. Oko kukuthi, beka i-HTML kwaye ucofe i-tab kwaye ubhale "html" kunye ne "/ html" ngokuzenzekelayo. Into kwezinye izicelo ukuba yenziwe.
LiveWeave Iyafana kakhulu nezinye, ayinanto abanye abangakwaziyo ukuyinikela ngokubaluleka. Esikubalaselisa ngale projekthi kuyilo lwayo, umbala omnyama ofana neCodePen kodwa ngokusasazwa kwesikwere. Ukwazi ukutshintsha ubungakanani ukungcamla. Kukwakhona imowudi ecacileyo kunye ne «ngaphandle komgca« apho ikhowudi oyilungisayo ingazukuboniswa kwimbonakalo, de ube uyayivula. Ayisiyonto ndiyifumana iluncedo kakhulu, njengomyili, kubalulekile ukuba uhlale ubona into oyhlelayo ngexesha lokwenyani, kodwa umntu uya kuyifumana iyinyani. Kwaye nangona, njengesiqhelo, ungabhalisa, umsebenzisi akanayo indima ekhokelayo. Kuba, nokuba awubhalisi, ungagcina iprojekthi yakho.
Esi sixhobo Yahluke ngokupheleleyo kule nto uyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku kuhlalutyo. Umbhalo ophantsi awukho njengesixhobo sewebhu, kodwa njengesicelo. Kwelinye icala, ngokuqinisekileyo kuluncedo ngakumbi ukuba unalo kwidesktop. Ngokukodwa ngenxa yengozi ye-intanethi okanye ukubanda ngenxa yokugqithisa kunye nokuphulukana nomsebenzi. Kwelinye icala, ayisiyonto ebonakalayo njengesixhobo esidlulileyo. Ngaphandle kokungabikho koluntu lokwabelana ngeeprojekthi.
Nantsi yonke into ivela ekuqaleni. Kuya kufuneka wenze iithebhu ukubeka imigca yekhowudi kwaye uyiqambe ngokutsha ukuze wazi ukuba yeyiphi. Ukuba eyokuqala yi-HTML, i-CSS yesibini ... okanye ngokuchaseneyo. Kananjalo ayinazindlela ezimfutshane zokuba izakuba yintoni incwadana yemigaqo epheleleyo, ngaphandle kwezicatshulwa.
Zonke iinkqubo ziyafana nokuchaphazeleka komntu ngamnye kwinkampani nganye ekhokelela ekubeni neenzuzo kunye neengozi kuzo. Ngamnye uya kukhetha eyona ilungele bona, Ingcebiso yam kukusebenzisa iCodePen okanye i-CSSDeck yokusingqongileyo kunye nenethiwekhi yoluntu eyiphetheyo. Kodwa, ukuba uthanda enye, shiya uluvo kwaye uchaze izizathu zakho, ziya kuba luncedo ngokuqinisekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Bugcisa » Uphuhliso lwangaphambili: i-CodePen okanye isicatshulwa esisezantsi?